Isi mmalite nke orchid: ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ, ihe ọ bụ na ihe kpatara ya ji dị mkpa, nakwa ihe ọ dị na foto ahụ? - Mkpụrụ ubi - 2020
Otu orchid na-enweghị isi na-eto eto - olee otú ọ ga-ekwe omume na ihe-eme banyere ya?
Ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ndị toro eto nke ọma mepụtara bụ ọnọdụ dị oké mkpa maka oge ọhụụ na nnukwu okooko osisi ọ bụla orchid.
Ihe mmepe nke ndị na-anọchi anya ezinụlọ a na-eme na akụkụ ahụ nke oghere ahụ, nke a na-akpọ ọganihu, ma bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ mebiri ma ọ bụ kpamkpam. Otú ọ dị, nkwụsị zuru ezu nke nrịta ọganihu abughi mkpụrụokwu maka osisi ahụ.
Ụdị na ọnọdụ
Enwere osisi na-enweghị oke?
Ihe ịrịba ama nke enweghị
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị ihe ndabere maka Ome?
Enweghị ihe kpatara ya
Epupụta nwụọ ma ọ bụ enwere mmebi ngwaọrụ.
E nwere ọrịa ndị ọrịa
Isi mmalite nke orchid bụ akụkụ apị nke osisi, na-enye ome ọhụrụ, mgbọrọgwụ axillary na buds buds.
Kedu ihe na-eto eto ka ọ dị na gịnị ka ọ bụ? Nke a na vegetative nke dị na ihe ọjọọ dị n'agbata epupụta nke rosette. N'oge uto na-eto eto, ọnọdụ ntolite dị ka ome ndị na-eto eto na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ahụ n'elu rosette.
Ọ bụrụ na osisi ahụ nọ na-ehi ụra, akụkụ ahụ maka mmepe ya na-ehi ụra ma dị ka olulu mmiri dị na nkwụsị nke ntọala apical aprics.
Ọzọkwa na foto ị ga-ahụ ihe nrịta uto nke ifuru dị ka:
Ọtụtụ mgbe na ọnọdụ nke ụlọ griinye nwere ụdị orchid type monopodial (phalaenopsis ma ọ bụ Wanda), nke njedebe nke otu ebe na-eto eto nọ. A na-emepụta akwụkwọ nke orchids ndị ọzọ, na-ebute ọnọdụ na-emegide ma na-akpụ rosette.
N'oge ọrụ vegetative nke osisi ahụ, ebe na-arịwanye elu na-emepụta akwụkwọ ọhụrụ, nakwa dịka mgbọrọgwụ axial kwesịrị ekwesị maka nri zuru ezu nke orchid.
Site na mpaghara interstitial nke akwụkwọ ọhụrụ na-apụta na stalks. Ọ bụrụ na ọnwụ ma ọ bụ mebiri ebe apical nke osisi ahụ, orchid na-akwụsị na-eto eto, na na ụfọdụ na-anwụ anwụ na-enweghị akụkụ a.
Enwere osisi na-enweghị oke na ihe ị ga-eme mgbe ha nwetara nsogbu? Orchids na-enweghị akụkụ vegetative adịghị. Ka o sina dị, a na-ahụkarị ndị nnọchianya nke ezinụlọ nwere nsogbu na-abawanye ma ọ bụ kpamkpam. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ị nwere ike ịchekwa osisi ahụ na ọnwụ, yana olileanya maka mmepe ya na ọdịdị nke peduncles. Ka anyị nyochaa nkowa.
A gaghị enwe ike ikpebi enweghị isi ihe na orchid site na njirimara ndị dị n'èzí:
Akuku nke osisi kpamkpam, ma n'ọnọdụ ya bụ "aka ukwu" a gwọrọ.
Ụkwụ elu emetụta ire ere ma ọ bụ ero.
Akwụkwọ elu orchids akpọnwụ ma ọ bụ gbanwee edo edo, a hụbeghịkwa ọganihu ọhụrụ.
Mgbe nchọpụta nke mgbaàmà ndị dị n'elu, ọ dị mkpa ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ. Dị ka a na-achị, enwere ike imebi ma ọ bụ kpamkpam kpam kpam site na:
Sunburnnke nwere ike imebi mkpụmkpụ na mgbanaka ndị na-adịghị mma.
Mechanical damage (dịka ọmụmaatụ, n'ihi ụda nke na-akụ na osisi).
Rotting. Dị ka a na-achị, a na-ejikọta rotting na ọnọdụ ntolite na ogologo oge na-emekarị nke mmiri n'ime akwụkwọ axils.
Fungal ma ọ bụ ọnya nje, mmalite nke nwere ike ijikọta ya ma mebiri ọnọdụ nke orchid, na ọnụnọ ha ugbu a n'oge ịzụta osisi ọhụrụ.
Ndị na-ekpuchi ihenke bu ntuputa nke pedoncle site na elu nke nputa ebe ebe etolite ga-adị (dị ka iwu, a na-ahụ ya na ngwa ngwa Dutch). N'okwu a, ọ na-anọgide na-agbalị ịmepụta ntụrụndụ nke ọganihu ọhụrụ site n'imeso akụrụ ọhụrụ na ọgwụ preparations hormonal.
Enweghi ma ọ bụ imebi ihe na-eto eto abụghị mgbe niile ka ọ bụrụ na ndị òtù ezinụlọ orchid na-ahịrịokwu maka ike ha. Ya mere, ịchọta nsogbu na mmanụ aṅụ, ị kwesịrị ịnwa iwepụ ha n'ụzọ niile.
Ọ bụrụ na enweghi nhụcha anya na mpaghara nchịkọta rosette, ma enweghi uto na osisi ahụ n'oge dị elu na-egosi nsogbu na ọnọdụ na-eto eto, ị kwesịrị ịnwa igbanwe ọnọdụ nke osisi ahụ:
Gbanwee ọnọdụ ọkụ (hazie igwe ọkụ, gbanwee ebe ikpo ọkụ).
Gbanwee ọnọdụ ịgbara mmirisite na ịsa ahụ osisi na mmiri ọkụ dịka ala kpochapụrụ.
Gbalịa 'na-eme ka obi dị ụtọ' orchid dozie ya ịsa ahụ na ịsa ahụ ma ọ bụ oge dị mkpirikpi nke oyi oyi na oyi (ọ bụghị ala karịa 10 Celsius).
Ọ bụrụ na njedebe na-eto eto abụghị ihe doro anya, ma akwụkwọ ndị dị n'akụkụ ya nwụrụ maọbụ ha anwụworị, wepụ mma ha ma gbasaa ngalaba ahụ na mbadamba carbon ma ọ bụ cinnamon arụ ọrụ maka disinfection.
O yikarịrị ka ọ bụrụ na a tọhapụrụ orchid na akụkụ ndị ahụ emetụtara na ihe nkwụnye ahụ nke mere ka ha funahụ, ọ malitere ịmalite, nwee obi ụtọ na akwụkwọ ọhụrụ, na n'oge na-adịghị anya ịtọ ụda osisi.
E kwesiri ime otu omume a n'ihe banyere imebi osisi na nkwụsị ogologo oge na mmepe. A na-ebipụchasị ihe nkedo na-eto eto na mpaghara ntụrụndụ. na-edozi disinfectant mejupụtara. Mgbe arụ ọrụ a gasịrị, osisi ahụ kwesịrị ịmalite ọganihu ọhụrụ ma nọgide na-eto eto na ọnọdụ nkịtị.
Tupu iberibe akụkụ ọ bụla nke orchid ahụ, ọ dị mkpa ka ị kpochaa ngwá ahụ n'ụzọ zuru ezu site n'ịkụnye ya na mmiri na-esi mmiri ma ọ bụ na-ejide ya na steam ọkụ. Icha mma na mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-aba n'anya na-aba n'anya bụ ihe kwesịrị ekwesị.
Ihe kachasị akpata mmebi nke ọganihu nke orchids bụ ntụgharị ya n'ihi nsị na-ekwesịghị ekwesị.
Orchids adịghị anabata ogologo oge stagnation nke mmiri na axils nke epupụta, na-aza ozugbo na oke mmiri ire ere. Mkpuru na-eto eto nke na-eto eto n'elu nchapu nwere ike itinye aka n'usoro a.
Ọ bụrụ na ọchịchị mmiri na-emebi, mmalite nke ntolite ahụ malitere ire ere, ọ dị mkpa:
Kpochapu akụkụ ndị mebiri emebi nke osisi ahụ nke nwere mma dị nkọ (ọ bụrụ na ire ere agbasawo n'ime rosette mpempe akwụkwọ ahụ, a ghaghị ihichapụ akụkụ ahụ metụtara ya kpamkpam n'akụkụ akụkụ ndụ ndụ dị mma, ma ọ bụrụ na usoro ntụgharị na-aga n'ihu na orchid ga-anwụ).
A ghaghị mesoo osisi dị iche iche na ngwakọta antiseptik pụrụ iche (na enweghị ya, carbon na-emegharị agbawa, carbon cinnamon, nakwa ihe ngwọta nke ahịhịa ndụ ma ọ bụ iodine ga-eme).
Chere ruo mgbe ebe ndị a ga-egbutu ya kpamkpam.
Jiri osisi na ala gbara ya gburugburu site na njikere nke nwere ọla kọpa (dịka ọmụmaatụ, mmiri mmiri Brodsky).
A ghaghị imegharị usoro nlepu ahụ ugboro ugboro ugboro abụọ na ụbọchị iri na ise.
Ọ bụrụ na e mebiri emebi orchid site na ire ere ojii, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịgwọ osisi ahụ. Ọzọkwa, ụdị ọrịa a dị oke egwu maka ndị agbata obi ya na ihe atụ ahụ emetụtara. Ya mere, ihe kachasị ezi uche mgbe ịchọta ntanarị ojii na orchid ga-ewepụ ya kpamkpam site na nchịkọta ahụ, yana ịgwọ ndị "agbata obi" na-acha akwụkwọ ndụ na-eji ihe ndị nwere ọla kọpa mee ihe maka mgbochi.
Ọ bụrụ na usoro ndị a dị elu nyere aka ịkwụsị usoro nke ire ere, ọ dị mkpa inye osisi ahụ ezigbo ọnọdụ maka idebe ma na-elele ya mgbe niile maka ire ere. Akparita orchid zuru oke ma ọ bụ ihe dị ka 80% ga-eme ka ọ ghọọ ọganihu ọhụrụ, ọ ga-anọgide na-etolite n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma mesịa mechaa okooko.
Anyị na-enye ikiri vidio banyere nrịba na-eto eto na orchids:
Ọ bụrụ na ihe kpatara nsogbu ahụ bụ ọrịa fungal, ị kwesịrị:
Jiri nlezianya nyochaa osisi ahụ maka ọnya nile nke ero.
Wepu ebe ndi ahu emetutara aka na akwukwo ndu osisi oma.
Wụsa ngalaba ahụ na ngwongwo disinfectant ka ha kpoo.
Na-emeso osisi niile na ala ya n'ite ya na ihe ngwọta nke 0.2% Fundazol, Topsin ma ọ bụ ndị ọkachamara antifungal pụrụ iche nke kwesịrị ekwesị maka orchids.
Ugboro abụọ na -emegharị nhazi na oge nke 10-14 ụbọchị.
Jiri nlezianya hụ mmata nke ọnya ọhụrụ.
Ọ bụrụ na a chọpụtara ero ahụ ọbụna tupu ọtụtụ n'ime vegetative uka nke osisi ahụ furu efu na kpamkpam ebibi, orchid nwere ohere ọ bụla iji nọgide na-eto eto ma na-enwe obi ụtọ maka ọdịdị nke peduncles ọhụrụ.
Ọ bụrụgodị na ọ dị njọ, orchid nwere ike ịmeghachi ihe na-arịwanye elu, na-akpụ ya n'ọnọdụ ebe a na-agbanye ụkwụ ma ọ bụ na-acha ọkụ ọkụ, n'ihi ya, ị gaghị ebu ụzọ wepụ osisi nke na-arịa ọrịa ahụ ma gbanwee ya. Nyochaa mgbanwe nke akụrụ ga-enyere ọgwụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, cytokinin tapawa.
Mgbochi kachasị mma maka imebi ihe na-eto eto nke orchid bụ ịhazi nlekọta kwesịrị ekwesị nke osisi ahụ site na nkeji mbụ nke ọdịdị ya na nchịkọta mkpụrụ osisi. Otu aro ndị a dị irè maka nhazigharị nke osisi ndị a na-emeso na-emetụta nke ọma.
Ya mere, maka ịgha mkpụrụ nke orchids na ọnọdụ nke ụlọ ọ dị mkpa:
Chọpụta osisi dị n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ. Na enweghị ohere dị otú a iji hazie ndokwa ọzọ na ndịda ma ọ bụ ọkụ ọkụ na windo dị n'ebe ugwu.
Hụ usoro ọchịchị okpomọkụ dị mma: n'oge oge na-eto eto, ọnọdụ okpomọkụ nke ogo 22 dị mkpa, ebe ọ bụ na oge ezumike ka ọdịnaya ahụ dị jụụ, ma ọ bụghị ịda n'okpuru 10 Celsius C.
Chebe osisi ahụ site na drafts (gụnyere site na ikuku oyi).
Nọgide na-achịkwa ọnọdụ iru mmiri na gburugburu 50-60% site na nchagharị mgbe niile, yana ịhụ na nchekwa nke osisi sitere na ikuku dị nso na radiator.
Mmiri nke orchid kwa 7-10 site na iberibe ite n'ime mmiri ọkụ maka 15-30 nkeji.
N'etiti "ịsa ahụ" ala n'ime ite ahụ kwesịrị ihichapụ kpamkpam.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na mmiri nke ala nke osisi ahụ si na egbe égbè ahụ gbapụ, mmiri dị na sinuses adịghị akpọnwụ maka ihe karịrị nkeji 30, ọ dị mkpa ịnakọta ya site n'enyemaka nke diski ma ọ bụ ncha owu.
Mgbe niile (ma ọ bụghị tupu ọnwa 1-2 ma ọ bụrụ na ọgwụgwọ ma ọ bụ transplant) ka ị tinye nri ịnweta pụrụ iche.
A na-ewere orchid dịka osisi na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ. Ka o sina dị, nkwupụta a bụ eziokwu nanị maka ịhazi ọnọdụ dị mma maka okooko ya. N'ozuzu, orchids nwere ogo dị oke mkpa ma nwedịrị ike ịnwetaghachi na njedebe zuru oke nke na-eto eto. ma nye onye nwe gị ohere ọhụụ ị ga - eji mee ka ị mara ma ọ bụ tụgharịa uche na mkpụrụ ọhụrụ.